Nhasi chiyeuchidzo cheApple Yakawedzerwa Khibhodi II, imwe yemakona akanakisa eMac | Ndinobva mac
Nguva nenguva zvakakodzera kutarisa kumashure, kuziva zvigadzirwa zveApple zvakachinja nhoroondo. Isu tinodzokera kuna1990, apo iyo iPhone yaisatombovapo. Apple yakachengetedzwa nhasi, iyo patent yeApple Yakawedzerwa Khibhodi II. Sezvo Apple yanga ichitiita kuti tijairire, chingave chimurenga. Kusvika padanho rekuti kusvika nhasi, maqueros mazhinji anoramba achishandisa iyi keyboard. Uye haisi kufungidzira. Munguva yekiyi ine kufamba kwakadzikira kwazvo, semuenzaniso iyo keyboard yezvazvino Apple malaptop, vashandisi vazhinji vachiri kusarudza mechina keyboard.
Kana iyo Apple Yakawedzerwa Khibhodi Yechipiri yakaitwa nefomula yakakwana: nguva yakapfuura uye iyo keyboard yaive yakaita sezuva rekutangala kutaipa kunzwa kwaive kwakakwana and the inzwi kuperekedza makiyi, tinya-kuridza, ichirira senge mimhanzi yekudenga. Panguva iyoyo, makomputa aive akagadzirirwa hafu, uye mazhinji akaedza kuyedza kuverenga pakati pekugadzirisa kwavo, neApple keyboard. Nhasi, inogona kushandiswa nekutenda kune adapta kushandura iyo keyboard kuburitsa ku USB.
Kune vazhinji, ndeimwe yemakona akanakisa munhoroondo yeApple. Panguva ino iwe unogona kufunga kuti iyo keyboard yakagadzirwa naSteve Jobs iye. Zvakanaka mune iyi kesi, yanga isiri. Mabasa aipesana nemakadhibhodi akawedzerwa, ayo akatanga kugadzirwa muna 1987. Mugore rimwe chetero, Mabasa akasiya Apple mushure mekurwa kwemukati nemukuru mukuru John Sculley. Steve Jobs anga asarudza makhibhodi mune echokwadi Apple maitiro, pasina miseve kana zviratidzo. Hatizive kana angave ari mutsigiri weTouch Bar nhasi.
Asi iyi Apple keyboard yakagadzirirwa kubudirira. Angave premium zvikamu. Iyo chaiyo yekunyora haina kukusiya usina hanya. Chaizvoizvo noti imwe neimwe yairira chimwe chinhu chakasiyana, ichikwanisa kuiziva. Zvakare, kune vazhinji, backspace yaive chaizvo zvavaida.
Kune iyo nostalgic, yakaunza nhau dzichiri kuyeukwa nanhasi. Mavara makuru aigara pakati nepakati pawaimanikidza, izvo zvaiita kuti zvikwanise kuziva nekukurumidza kana iwe wainyora nemavara makuru. Iyo yakaunzawo rutsoka runotambanuka pachigadziko chayo, kusiyana neyakatangira, ichigadzirisa pakukwirira.
Muchidimbu, iyo keyboard haina kutisiya tisina hanya uye nhasi tinoirangarira sezvazvinokodzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Nhasi chiyeuchidzo cheApple Yakawedzerwa Khibhodi II, imwe yemakona akanakisa eMac
dickson vaviri akadaro
Mubvunzo ndewokuti? inogona kuenzanisirwa kuishandisa ne usb kune mac yemazuva ano?
Pindura Dickson Couple